Global Voices teny Malagasy » Tena Nihevitra Ny Japoney Sasany Fa Ho Azon’ I Haruki Murakami Ihany Ny Loka Nobel Amin’ity Indray Mitoraka Ity · Global Voices teny Malagasy » Print
Tena Nihevitra Ny Japoney Sasany Fa Ho Azon’ I Haruki Murakami Ihany Ny Loka Nobel Amin'ity Indray Mitoraka Ity
Voadika ny 19 Oktobra 2016 5:34 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika Liva Andriamanantena
Fanazavana: “Hahazo ny Loka Nobel ve i Haruki Murakami ?” — Loka Nobel literatiora izay omena izao hariva izao. Pikantsary avy amin'ny ANN News fantsona YouTube ofisialy .
Tamin'ny 13 Oktobra, lasan'ilay mpihira sady mpitendry mozika Amerikana Bob Dylan  ” ny Loka Nobel Literatiora 2016 noho izy namorona teny poetika vaovao tao anatin'ny hira nentim-paharazana Amerikana mahafinaritra “.
Raha maro ny olona nankalaza ny zava-bitan'i Bob Dylan  manerana izao tontolo izao  [mg], diso fanantenana tamin'ny vaovao kosa ny sasany ao Japana. Maro no nieritreritra fa handresy ihany amin'ity taona ity ilay mpanoratra tantara Japoney Haruki Murakami.
12 ora sisa dia hambara ny Loka Nobel [Literatiora] 2016. Hahazo ny loka ve i Haruki Murakami amin'ity taona ity? – Vaovaon'i Murakami Haruki [tranonkalan'ny mpankafy]
Iray amin'ireo mpanoratra malaza indrindra miasa ao Japana amin'izao fotoana izao i Haruki Murakami . Isaky ny mamoaka boky vaovao i Murakami, dia lasa hetsika ara-kolontsaina iray lehibe ao Japana izany:
Figadonan'ny fivoahan'ny boky vaovao an'i Haruki Murakami. Lava ny filaharana, aleoko aloha mandeha [ mody] noho izany.
Lasa maro mpanaraka manerantany i Murakami noho ny fandikana ireo tantara sy ireo tantara fohy tamin'ny tenim-pirenena 50 samy hafa  fara fahakeliny. Nahazo loka fanta-daza maro  tao Japana sy tany ivelany i Murakami, ka ny Loka Nobel Literatiora no mety ho zava-bita farany mba hisalorany amin'ilay asa miavaka .
Talohan'ny fanambaran'ny Ivontoerana Nobel tamin'ny 13 Oktobra, nitatitra  ny tambajotra Fahitalavitra Japoney ANN  fa nahazo ny laharana favori voalohany tamin'ny fahazoana ny loka i Murakami ary tsy tao anatin'ny lisitr'ireo tafakatra famaranana akory i Bob Dylan:
Tati-baovao tao amin'ny fahitalavitra Japoney momba ny mety ho filaharan'i Haruki Murakami mahazo ny loka Nobel. Sary avy amin'ny ANN News fantsona YouTube ofisialy .
Natao tamin'ny fomba feno fanajana ao Japana ny Loka Nobel, izay toerana manana ny isan'ny mpandresy faharoa betsaka indrindra mahazo ny loka Nobel  aorian'i Etazonia.
Mihazakazaka be ny fiandrasan'ireo mpankafy ny fandresen'i Haruki Murakami :
Nahoana, misaotra anareo! Azon'i Haruki Murakami ny Loka Nobel ho an'ny Literatiora! Haruki no voatonona!
Kanefa tsy izay ny zava-nitranga.
#ノーベル文学賞  発表の瞬間。会場には驚きと歓喜の声が。最初はスウェーデン語だったのですが「ボブ・ディラン」という名前だけは分かりました。 #NobelLiteraturePrize  pic.twitter.com/Nc16c695V1 
Ny fotoana nanambarana ny #LokaNobelLiteratiora  . Nanakoako ny efitrano ny fahagagana sy ny fifaliana. Natao tamin'ny teny soedoa (sic) ny fanambarana voalohany, ka fantatra ilay anarana hoe “Bob Dylan”.
Tena lehibe ny fiandrasana ny fandresen'i Murakami hany ka nivory mba hanatrika ny fanambarana ny Loka Nobel tamin'ny alàlan'ny rohin'ny zanabolana ny mpianatra maintimolalin'ilay mpanoratra Japoney avy any amin'ny lisea iray tao Kobe.
Nitatitra ny Fampitam-Baovao Mpanaitaitra Nikkan Sports fa fara faharatsiny iray ny mpanatrika fanina tamin'ny antony nahazoan'i Bob Dylan ny lokan'ny literatiora:
村上春樹氏母校ため息「ボブ・ディランは歌手やろ」 – 社会 @nikkansports さんから https://t.co/xOIz6Qtz40  #ノーベル文学賞  #村上春樹  #ボブ・ディラン 
Sioka: Nisento ny mpanatrika tao amin'ny lisea an'i Murakami fahiny: “Tsy * mpihira * ve io Bob Dylan io?”
Lohateny sy famintinana: Tsy maintsy mbola miandry ny Loka Nobel i Murakami, “Mpankafy an'i Bob Dylan tokoa izy.”
Mbola nandalo ny Loka Nobel indray ilay mpanoratra tantara Haruki Murakami, na dia nieritreritra izany ho tamin'ity taona ity aza ny “Haruki-ista” (mpankafy an'i Haruki Murakami). […]
Nanana fomba fijery miahiahy kokoa tamin'ny dokambarotra miverimberina fanao isan-taona manodidina ny mety ho Loka Nobel an'i Haruki Murakami ny sasany amin'ireo mpisera Twitter Japoney :
“Ity amin'izay no taona ahazoan'i Haruki Murakami ny Loka Nobel! Ho azony ihany ny Loka Nobel ho an'ny Literatiora! Lasan'i Haruki io! “
Fa toa nanao ny Loka Nobel ho toy ny sezan'ny lalao mozika ny olona rehetra, miaraka amin'ny mpandray anjara tsara vintana iray mahazo ny loka noho ny filalaovana fotsiny. (Mazava ho azy, mihevitra aho fa izy no tokony hahazo ny loka).
Ho an'ny hafa, lasa mampalahelo mampihomehy ny fihetsem-po tamin'ny fahadisoam-panantenana mahazatra isan-taona :
Mahafinaritra sy lavorary ny fanombohany amin'ny hoe: “Moa ve ity taona ity no andraisan'i Haruki Murakami ny Loka Nobel?”, Ary niafara hatrany tamin'ny fandalovana azy fotsiny izany.
Hita mialoha isan-taona ny endrika [ fiandrasana ny fanantenana sy fahadisoam-panantenana] ary tsy fanitarana ny ilazana izany hoe lasa nanome endri-javakanto ny “fanaovana dokambarotra be tamin'ny Nobel Murakami “- fitsangatsanganana tontolo andro niafara tamin'ny fanantenana sy fahakiviana izany. […]
Raha mety ho nanontany tena ny sasany momba ny fanapahan-kevitra tamin'ny fanomezana ny loka ho an'i Bob Dylan, ilay mpamoron-kira, ilay nahazo ny Loka Nobel ho an'ny literatiora, fara fahakeliny nisy Twitter Japoney iray faly tamin'ny vokatra;
Namaky ny tantaran'i Haruki Murakami rehetra aho, ary fantatro fa tena tsy tian'ny mpanoratra manokana ny fankalazana azy manokana ao amin'ny dokambarotra [natao momba ny mety ahazoany ny Loka Nobel]. Ary tena mieritreritra ny hafalian'ny tenany manokana ireo olona naniry an'i Murakami mba handresy.
Nihaino ny hiran'i Bob Dylan rehetra aho -Manontany tena aho raha nihaino [ny zava-drehetra nataon'i Bob Dylan] ireo mpikambana ao amin'ny komitin'ny Nobel. Azo inoana fa tsy namaky ny tantaran'i Haruki Murakami amin'ny teny Japoney ôrizinaly ny mpitsara Nobel .
Toa tahaka ny resaka politika ny fahazoana ny loka Nobel .
Tamin'ity taona ity, faly aho fa natao ho toy ny literatiora ny famoronan-kira.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/10/19/90162/
 ANN News fantsona YouTube ofisialy: https://youtu.be/Uw3VguSiMT4
 Bob Dylan: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2016/press.html
 Bob Dylan: http://www.newyorker.com/culture/culture-desk/bob-dylan-in-the-new-yorker?mbid=social_twitter
 manerana izao tontolo izao: https://mg.globalvoices.org/2016/10/17/90114/
 October 12, 2016: https://twitter.com/murakami_times/status/786340756126441473
 Haruki Murakami: http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/tip-sheet/article/63604-the-10-best-haruki-murakami-books.html
 April 11, 2013: https://twitter.com/eikoran/status/322371842734170112
 tenim-pirenena 50 samy hafa: https://www.curtisbrown.co.uk/haruki-marukami-now-available-in-50-languages/
 loka fanta-daza maro: https://en.wikipedia.org/wiki/Haruki_Murakami#Recognition
 toerana manana ny isan'ny mpandresy faharoa betsaka indrindra mahazo ny loka Nobel: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Japanese_Nobel_laureates
 October 13, 2016: https://twitter.com/WoCrymore_/status/786710905832734721
 October 13, 2016: https://twitter.com/shiho_watanabe/status/786567048042340352
 October 13, 2016: https://twitter.com/nikkansports/status/786567698444488704
 October 13, 2016: https://twitter.com/e_Li2CO3/status/786693966586646529
 October 13, 2016: https://twitter.com/Gakuen_Orio/status/786542599448297472
 October 13, 2016: https://twitter.com/RyuichiSato/status/786570216410984448